Casharro si loo abuuro casuumaadaha Halloween | Abuurista khadka tooska ah
Tutorial loogu talagalay abuurista casumaadaha Halloween
Michael Gaton | | Design Graphic, Photoshop
Oktoobar 31 maahan oo keliya in dadka Mareykanka cabsi ay qabato; halkan sidoo kale, waxay ku qaylin doonaan "Dhagar ama daaweyn?" The xaflada halgamaa aad ayey caan ugu tahay sanad walba, gaar ahaan carruurta. Laakiin sidoo kale dad aad u tiro badan ayaa ku raaxeysanaya jacaylka naxdinta waxayna u labistaan ​​sidii vampire, werewolf, sixir ama zombie ... ma jiro wax xadidan oo khiyaali argagax leh. Kuwa sidoo kale doonaya inay abaabulaan xafladooda gaarka ah ee Halloween waxay ku siin karaan taabasho gaar ah qaar ka mid ah casuumaadaha Halloween ay iyagu sameeyeen guriga. Halkan waxaan kaaga tagnay casharkaan oo lala sameeyay iskaashi Habeenimadii Qoraal.es!
Casharkaan waxaan ku tusi doonaa talaabo talaabo sida aad u sameyn karto a kaarka halloween.
1 Tallaabada 1
2 Tallaabada 2
3 Tallaabada 3
4 Tallaabada 4
5 Tallaabada 5
6 Tallaabada 6
7 Tallaabada 7
8 Tallaabada 8
9 Tallaabada 9
10 Tallaabada 10
11 Tallaabada 11
12 Tallaabada 12
13 Tallaabada 13
14 Tallaabada 14
15 Tallaabada 15
16 Tallaabada 16
17 Tallaabada 17
18 Tallaabada 18
Waxaan ku talinaynaa isticmaal barnaamijka tafatirka sawirka Photoshop oo dhameystiran inaad sameysato kaarkaaga Halloween. Si aad u bilowdo mashruuca cabsida leh u tag "Faylka"> "Cusub" oo xulo qaab DIN A6 oo toosan. Si kaarkaagu u helo saameynta la rabay, waxaan kugula talineynaa inaad doorato xalka 300 dpi. Tani waxay ku guuleysan doontaa natiijo daabacan oo habboon. Wixii sii hawo dayrta naqshada, riix isku darka furaha "Shift + Ctrl + N" oo dooro midabka wejigiisa # e6cca0 - #ffffff ee asalka. Dabcan sidoo kale waxaad dooran kartaa midab kale oo aad jeceshahay.
Waa maxay ujeedku midka ugu habboon Halloween? Dabcan waa bocorka! Si aad u abuurto, xulo aaladda «Barroosinka barta». Hadda waxaad ku sawiri kartaa bocor ku yaal shaashaddaada hadba sida aad u dhadhamiso. Haddii ay u muuqato mid weyn oo xoog leh, waxay noqon doontaa ujeeddada dhexe ee kaarka Halloween ee aad qorsheyneyso.
para sii bocorka midab xoog leh, laba-guji lakabka "Jidka Pumpkin" oo ku dar qaabka lakabka cusub. Taas awgeed, ka dooro qaabka "Radial Gradient" sida "Gradient" liiska macnaha guud. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho midabka liinta ee daran # 79e21- # f37c24.
Hadda waxay ku saabsan tahay bocorka noolee. Mar labaad isticmaal aaladda "Anchor Point" oo ku sawiro dhowr wareeg oo wareeg ah bocorka. Khadadka uma baahna inay noqdaan kuwo hagaagsan sinnaba - markay yaryihiinba, kolba inta dabiiciga ah ee ka soo baxda natiijada ayaa fiirin doonta dhamaadka.
Khadadka lagu sawiray «bar barroosinka» waxay dejinayaan lakab cusub oo hadda ah taagan midab kale. Taabo "Shift + Ctrl + N" oo kudar lakab cusub. Markaas isticmaal aaladda "Burushka" oo leh qaabka dhibic "Soft Round" iyo dhexroor dhan 100 px. Waxaan kugula talineynaa midab liin madow ah si aad u midabeyso: # d8530e. Hadda waxaad ku sawiri kartaa buraashka lakabka cusub ee la abuuray. Markaas waxaad dooran kartaa "Tirtir" oo aad masixi wax yar geesaha kore iyo hoose. Waxay horey u siiyeen lakabka koowaad ee bocorkooda qaab dhismeed midab leh.
Tallaabadan waa inaad si fudud ugu celi tallaabada 5 dhowr jeer ilaa aad ka hesho bocor qaab leh. Ugu dambeyntiina, waad qaabeyn kartaa dhammaan lakabyada adigoo adeegsanaya aaladda "Move".
Kadib waxaad siin kartaa bocorka boomaatada caadiga ah ee Halloween gashan koofiyad sixir. Mar labaad u isticmaal aaladda "Anchor Point" taas, oo xulo midabka # 031924 oo ah madow qoto dheer. Hadda waad soo saari kartaa hal-abuurkaaga oo aad ku dhaqmi kartaa sixir si aad u abuurto koofiyad sixir ah.
para koofiyadda u dhaqaaji booska saxda ah waa in loo qaabeeyaa sidii lakab shaqsiyeed. Qabo furaha "Ctrl" oo guji lakabka leh koofiyada si aad u abuurto xulasho cusub. Hada kudar lakab cusub. Qalabka «Burushka» iyo mugdi ah 50% waxaad ku rinjiyeyn kartaa qaybaha mugdiga iyo iftiinka leh madow iyo caddaan siday u kala horreeyaan.
Si aad koofiyadda u siiso dhammaadka taabashada waad awoodi kartaa ku dar xarig casaan fiican. Ku noqo "Barta barroosinka" oo dooro midab casaan qoto dheer: # 720b02. Kadib ku dheji faantada hareeraha koofiyada sixirka. Kadib laba jeer guji lakabka la abuuray iyo ku dar hooska gudaha iyo gudaha adoo adeegsanaya midabka cad.
Si aad u qurxiso koofiyada sixirka waad awoodaa dul saar dahab ah. Sidoo kale kiiskan waa inaan u isticmaalnaa Barta Barroosinka »si aan u sawirno laba jibbaar aan caadi ahayn. Si daloolka loogu soo gaadho xarunta, xulo barta "Qalabka Kala Xulashada" ee ku taal bar menu ka dibna dooro barta "Kala-goynta" qaabka qalabka.
Tallaabada xigta, laba jeer guji lakabka "garka" kuna dar saamaynta "Drop Shadow" ee aad ka hesho hoosta liiska "Add Effects". Ku dar xulashada "Glow Inner" iyo "Gradient Overlay". In sidan, guntin dahab dhab ah koofiyadduna sixirku waxay noqon doontaa wax lagu soo bandhigo.
Markaa waa inaad mar labaad wax ka qabataa cajaladda. Waad u sii socon kartaa sidii Tallaabada 8 oo aad ku abuuri kartaa lakab cusub dusha sare ee xargaha. Karaa dib-u-dar hooskii oo ifaya.
para sii koofiyad sixirka muuqaal caag ah oo badan, waa muhiim in la abuuro hooska koofiyada hoosteeda. Taas awgeed, waa inaad si fudud ugu sii socotaa sida soo socota: Ku dar lakab cusub, u dhaqaaji lakabka hoosta koofiyadda. Guji lakabkan oo samee xul cusub adoo adeegsanaya aaladda "Elliptical Marquee". Waad wax ka beddeli kartaa xulashada adoo aadaya "Xulista"> "Editing"> dooro "Smooth cows" oo gal inta u dhexeysa 5 iyo 10px. Ku buuxi xulashada midab madow sidan: Tifatir> Buuxi Dusha sare.
Hadda waxay ku saabsan tahay abuur harka bocorka oo dhan. Si fudud ugu celi tallaabada 13 taas, laakiin markan waa inaad ku buuxisaa xulashada midab midab leh oo kani noqon lahaa: laga bilaabo madow illaa hufnaan.
In hooska la siiyo hawo muujinaysa xitaa in ka badan oo aan ku jirno Halloween ayay ahayd mari shaandhada cilladaha lakabkan. Gal gudaha "Filters" menu-ka "Sifeothing Filters" oo xulo "Gaussian blur".
Bocorka A Halloween ma noqon karo waji la'aan! Dooro aaladda "Barroosinka Barta" markale naqshadeeyaan indhaha, sanka iyo afka. Halkan waxaan ku kala dooran karnaa bocor xanaaq badan, qosol badan ama cabsi leh.
Ugu dambeyntii, waxay ku saabsan tahay ku cadee shaqada adoo kaamilinaya waxyaabaha cusub ee lagu soo daray oo leh saameyn la yaab leh. Tusaale ahaan, laba jeer isha ku dhufo si aad u furto qaabka lakabka, haddaba dooro "Hooska Gudaha" oo caddee: oo leh 25 px fogaanta, cabbirka 0px iyo dhalaalka dibedda. Waxaad kuheli doontaa natiijada ugufiican adoo adeegsanaya midabka # feef00 iyo isweydaarsiga isweydaarsiga ee kusalaysan midabka dariiqa # 851402- # b42603. Markaa waa inaad nuqul ka sameysaa lakabkan si uu ula jeedo sanka iyo afka oo bocorkaaga Halloween ayaa diyaar u ah inuu daabaco.
Adoo adeegsanaya ikhtiyaarka «Kudar qoraalka» sidoo kale waad sameyn kartaa abuur hal-ku-dheg asal ah oo Halloween ah oo u dir mashruuca OvernightPrints. Idinkuna waad wada diyaar tihiin, waxaan kuu soo diri doonnaa casuumaadaada waqtiga xafladda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Tutorial loogu talagalay abuurista casumaadaha Halloween
Muuqaal muuqaal ah oo lagu sawiray alwaax alwaax ah by Alison Moritsugu
10 Sawirada Halloween ee PC iyo Mac